Ukusingatha Iziliphu - 802Quits
Ama-Vermonters UKUHLALA UKUYEKA Ukusingatha Iziliphu
Ukuyeka ukubhema, ukuqhuma noma olunye ugwayi kufana nokufunda ikhono elisha — njengokudlala i-basketball noma ukushayela imoto. Into ebaluleke kakhulu ongayenza ukuzijwayeza — ngoba njalo uma uzama ukuyeka, ufunda okuthile okusha. Kungakho yonke imizamo ibalwa. Qiniseka ukuthi uzinika udumo ngawo wonke umsebenzi owenzayo wokuyeka. Ungakhohlwa, uma udinga usizo oluthe xaxa ukuze uhlale uyeke, ama-802Quits anikezwa ngokwezifiso usizo ngocingo (1-800-QUIT-NOW), mathupha naku-inthanethi.
Kwesinye isikhathi, noma ngabe umgomo uwukuyeka ngokuphelele, ungahle ushelele. Konke ukushelela kusho ukuthi udinga ukuzijwayeza okwengeziwe ukuphatha isimo esithile. Ukhiye uku buyela emuva endleleni futhi ungavumeli isiliphu singene endleleni yakho. Kungokwemvelo ukuzizwa uphansi noma unemicabango engemihle ngokulangazelela ugwayi noma ukushelela. Zilungiselele lokhu, futhi ungavumeli imizwa engemihle ikwenze ubuyele ekubhemeni, ekuqhumeni noma kolunye ugwayi.
Khumbula: Isiliphu ukushelela nje. Akusho ukuthi ungumuntu obhemayo, we-vaper noma osebenzisa ugwayi futhi. Ukuhlala ungawugwayi ngokuvamile kungaba nzima. Landela lezi zinyathelo ukukusiza ukuthi uyeke ukuyeka. Uma kwenzeka ubuyela emuva, khumbula, abantu abaningi bayashibilika! Cabanga ukuthi uhambe ibanga elingakanani kulolu hambo oluya empilweni engenakho ugwayi ezokunikeza inkululeko ethe xaxa yokujabulela ezinye izinto. Vele ubuyele "emgqeni."
Ungalokothi ukhohlwe izizathu zakho zokuyeka.
Ungathathi ngisho "nje ukukhahlela oku-1" komunye ugwayi noma "ukuhlafuna okukodwa" kagwayi ohlafunwayo noma "i-vape-hit" eyodwa nje.
Ungazilinganisi futhi ucabange ukuthi ungathola eyodwa kuphela.
Hlela izimo eziyingozi (isithukuthezi, ukuphuza utshwala, ingcindezi) bese unquma ukuthi uzokwenzani esikhundleni sokusebenzisa ugwayi.
Zivuze ngokungasebenzisi ugwayi. Sebenzisa imali oyongelayo ekungathengi ugwayi noma eminye imikhiqizo entweni ethile ezuzisayo kuwe. Ingaba nkulu njengemoto esetshenzisiwe, ngoba iphakethe elilodwa likagwayi ngosuku lingabiza ngaphezu kwama- $ 1 ngonyaka.
Ziqhenye ngokuzama ukuyeka ukusebenzisa ugwayi bese wabelana nabanye ngendaba yakho.
Qala ukuzicabangela njengomuntu ongabhemi, ongenalo ugwayi.